Purpose Of Reunion (mmsub)
by CHANNEL+ November 01, 2020
Purpose Of Reunion မွနျမာစာတနျးထိုး
Dongchul ဟာ ဘားအသေးစားတဈခုကို စီမံခနျ့ခှဲနသေူတဈယောကျ။ သူဟာ အမွဲတမျး ကြောငျးသားဟောငျးတှဆေုံ့ပှဲ ကို စီစဉျခငျြနသေူပါ။ တဈနကေ့တြော့ သူ့ဘားကို သူငယျခငျြးမတဈယောကျ ယောကျလာပါတယျ။ Yujinဆိုတဲ့ အဲ့သူငယျခငျြးမလေးဟာ ကြောငျးသားဟောငျး တှဆေုံ့ပှဲတို့ဘာတို့ လညျး သှားလသှေ့ားထ ရှိတဲ့လူမဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုဘားမှာ အမှတျမထငျ တှလေို့ကျတဲ့အခါမှာ သံယောဇဉျ လကျကနျြလေးနဲ့ ခဈြခွငျးတရားတှေ ဖွဈပျေါလာပွီး နယျတှကြှေံကုနျကွပါတော့တယျ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ လြှို့ဝှကျခကျြတှေ မရှိတော့ဘဲ သံယောဇဉျတှေ တှယျသထကျတှယျလာခြိနျမှာမှ Dongchulရဲ့ ဇနီးဟာ Dounchulဆီရောကျလာခြိနျမှာတော့ …. ဘယျတှေ ဆကျဖွဈမှာလဲဆိုတာ CM ပရိသတျကွီး ကိုယျတိုငျပဲ ဆကျလကျခံစားကွညျ့ရှူလိုကျကွပါဦး။ လိငျအသားပေး ဇာတျဝငျခနျး ခပျကွမျးကွမျးတှနေဲ့ ဆှဲဆောငျထားတာမို့ ၁၈ နှဈ မပွညျ့သေးသူမြား မကွညျ့သငျ့သလို၊ မိသားစုနဲ့အတူလဲ မကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားပါ။
Purpose Of Reunion မြန်မာစာတန်းထိုး
Dongchul ဟာ ဘားအသေးစားတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲနေသူတစ်ယောက်။ သူဟာ အမြဲတမ်း ကျောင်းသားဟောင်းတွေ့ဆုံပွဲ ကို စီစဉ်ချင်နေသူပါ။ တစ်နေ့ကျတော့ သူ့ဘားကို သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက် ယောက်လာပါတယ်။ Yujinဆိုတဲ့ အဲ့သူငယ်ချင်းမလေးဟာ ကျောင်းသားဟောင်း တွေ့ဆုံပွဲတို့ဘာတို့ လည်း သွားလေ့သွားထ ရှိတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဘားမှာ အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ သံယောဇဉ် လက်ကျန်လေးနဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နယ်တွေကျွံကုန်ကြပါတော့တယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မရှိတော့ဘဲ သံယောဇဉ်တွေ တွယ်သထက်တွယ်လာချိန်မှာမှ Dongchulရဲ့ ဇနီးဟာ Dounchulဆီရောက်လာချိန်မှာတော့ …. ဘယ်တွေ ဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာ CM ပရိသတ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှူလိုက်ကြပါဦး။ လိင်အသားပေး ဇာတ်ဝင်ခန်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားတာမို့ ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးသူများ မကြည့်သင့်သလို၊ မိသားစုနဲ့အတူလဲ မကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
Link - http://adfoc.us/54757276454039
Link - https://mkvlinks.xyz/6DOH